Israely · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Israely · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Israely tamin'ny Novambra, 2012
Hehy 27 Novambra 2012
Palestina 25 Novambra 2012
Palestina 22 Novambra 2012
Ady & Fifandirana 22 Novambra 2012
Ora vitsivitsy mialoha ny fanambarana ny fampiatoan'ady eo amin'i Isiraely sy ny Hamas, nisy bus iray nipoaka teo afovoan'i Tel Aviv tokotokony ho mitataovovonana androany [21 novambra] , izay nandratra olona 17. Ny Hamas no nilaza ho tompon'andraikitra amin'ny fipoahana, izay lazain'ny maro ho fikasana handavaka ny fifampiresahana hampitsaharana ny...
Ady & Fifandirana 21 Novambra 2012
Mampiasa ny tambajotra sosialy ny Isiraeliana hanangona-kevitra sy hizara ny fiainany nandritra ny [dimy] andro vitsivitsy nizakana ny daroka balafomangan'ny Hamas niraraka sahala amin'ny orana any amin'ny faritra atsimo sy afovoan'i Isiraely. Raha miezaka misera mavitrika ao amin'ny Twitter ny tafi-piarovana isiraeliana ifehezana ny hafatra sy hahazoana fanohanana an-tserasera, maro...
Efa Atsy Ho Atsy Ve Ny Fampitsaharana Ny Poa-basy Hamas/Isiraely?
Palestina 21 Novambra 2012
Niely vetivety tamin'ny aterineto ny vaovao fa hanasonia fifanekena momba ny fampitsaharana ny poa basy ao Gaza ny Hamas sy Isiraely androany alina [20 Nov 2012] ao Kairo, taorian'ny herinandro nisian'ny herisetra. Tao Gaza, Hoy i Ismaeil Mohaisen nitatitra: @IsmaeilFadel: VAOVAO FARANY: hanatontosa valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny lehiben'ny...
Palestina: Mifanditra ny Tambajotra Sosialy, Efa-taona Izay
Raha hiverenana ny tamin'ny taona 2008, nandritra ny fanafihan'i Isiraely an'i Gaza izay namoizan'ain'olona mahery ny 1400 (olo-tsotra avokoa ny 700 mahery), nampiasa ny tambajotra sosialy ny olona manerantany mba haneho hevitra mikasika ny fanafihana sy ny politika ambadik'izany. Twitter, izay mbola sehatra fampiasan'ireo tanora, no toerana niadian-kevitra, raha toa kosa ka...
Ady & Fifandirana 20 Novambra 2012
Amerika Latina 19 Novambra 2012
Niteraka hetsi-panoherana tsy dia nahazatra loatra teo anoloan'ny Masoivoho Israeliana tao Santiago, Shily ny fifandonana teo amin'ny governemanta Israeliana sy ny Hamas tao amin'ny lemak'i Gaza. Mipoitra ireo fanehoan-kevitra avy aminà firenena iray , izay na eo aza ny elanelan-tany, dia toy ny tanindrazana kosa ho an'ireo Palestiniana manodidina ny 350.000, izay mahatonga ity firenena ity ho manana Palestiana be indrindra mivelona ivelan'ny tontolo Arabo.